Maxaa hore u jiray, Android ama IOS? | Androidsis
Maxay ahayd kahor, Android ama IOS?
Zack | | Noticias
Weligaa ma is weydiisay, Maxaa la soo saaray ka hor Android ama IOS? Maqaalkan waxaan isku dayi doonaa inaan sharxno midkee baa ugu horreeyay.
Waqti ka hor, Steve Jobs wuxuu soo xigtay ereyada soo socda:"Waxaan burburin doonaa Android maxaa yeelay waa shey la soo xaday", oo ku eedeeyay Android inay ahayd nuqul ka mid ah IOS.
Kadib oraahdii muranka dhalisay Google ayaa sidaas sheegtay: "Waa wax aan macquul aheyn in ay soo guurisay Apple, tan iyo markii Android ay ka horeysay iOS".
Eric Schmid, Agaasimihii hore ee Google, ayaa xaqiijiyay:
Waxaan go aansaday inaanan faallo ka bixin waxa ku qoran buug dhimashadiisa ka dib. Steve waa bini aadam cajiib ah waana qof aan u xiisay. Faallo guud ahaan, waxaan u maleynayaa in dad badani isku raaci doonaan in Google uu yahay hal-abuure weyn iyo Waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo in dadaalka Android uu bilaabmay kahor dadaalkii iPhone".
Oo way uqalanto taariikhaha, tan iyo hadaan eegno, Android waxaa la aasaasay 2003 laba sano kadib (2005) waxaa iibsaday Google. Taas bedelkeeda, Apple waxay sii deysay qalabkeeda iphone 2007.
Tani ma baabiinayso fikradda ah in Apple uu bilaabay horumarka IOS kahor 2003. Laakiin waxa lagu xisaabtamayaa yaa qaatay hal-abuurnimada iyo aragtida bilowga ah cidda ka timid. Android wuxuu noqon lahaa guuleyste maxaa yeelay waxay qaadan doontaa 4 sano in la horumariyo kahor Iphone-ka ugu horreeya suuqa.
Anigu shaqsiyan waan ku faraxsanahay Steve Jobs, heer shaqsiyeed iyo heer kumbuyuutar labadaba. Tan iyo markii la aasaasay, waxay ikhtiraacday tikniyoolajiyadda iyo naqshadeynta labadaba. Dhab ahaantii, farshaxan xisaabeed.
Iyo si lama filaan ah, weedha weyn ee Pablo Picasso ayaa maskaxda ku haysa: "Farshaxanada wanaagsan ayaa koobiyeeya, fanaaniinta waawayn ayaa xada." Beryahan Applena waa farshaxan weyn Baarka ogeysiiska sax?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Maxay ahayd kahor, Android ama IOS?
Robert Gabriel dijo
Jawaab Robert Gabriel
Waa hagaag, waa hagaag, waa hagaag ……… .maxaa kale oo ay ku kala duwan yihiin yaa koobiyeya yaa, yaa ahaa kii labaad ama labaad hadii anaga noo fiican waxaa fiican inay koobiyeeyaan wax kasta oo ay rabaan iyo markaan dukaanka aado inaan ka iibsado taleefan nuqulkiisa ah mid iyo tan kale gacmahayga ayay ku hayaan mashiinka ugu fiican ee jiri kara, waxaan u maleynayaa inay si fiican u shaqeeyaan, sax?
Ku jawaab Covery
Toosinta! Baarka ogeysiiska ee iOS. Waxay jirtay muddo dheer ka hor intaysan ka muuqan android, iyadoo la siiyay inaad haysato JAILBREAK, waxaad ku rakibi kartaa tweak loo yaqaan 'lockinfo', iyo dhinaca ogaysiinta, iyo wixii intaa ka sii badan, Apple waxay qaadatay fikraddaas JAILBREAK ah oo aan laga koobiyeyn fikradaha Google. Anigana waxaan ku siinayaa macluumaad kale, barta ogeysiiska 'android', waxaa ku yaal badhannada si loo joojiyo wifi iyo wixii la mid ah, taasna horeyba wey u jirtay jebinta iPhone-kii ugu horreeyay, waxay ahayd isbeddel la yiraahdo oo loogu yeero SBSettings. Anigana waxaan ku siinayaa macluumaad kale, SBSettings waxay leedahay shaqooyin isku mid ah, isla badhamada sida barta ogeysiiska android, sida layaabka leh. Android waa macruufka Google ... Aynu u maleyno in ragga, android aysan waxba ka badnayn macruufka wax laga beddelay (waxaan ku hadlayaa adeegsadaha isticmaalaha) Jidka, wax kale, Faransiiska dhowr bilood ka hor dukaan Samsungs & Androids ah, xagga hoose ee derbiga waxaa ku yaal astaamo badan oo codsi ah, mid ka mid ah codsiyadaasna wuxuu ahaa Apple App Store, isla astaanta, isla taariikhda asalka ah icon .. Sidee qosol badan, ugu dambayn intee le'eg xatooyo lagu socdo ilaa Apple, laakiin iyagu hal talaabo ayaa ka horeeya.
Ku jawaab Maurogoya
Yeynaan noqonin kuwa xagjir ah. Haddayna midkood ugu horreeyey mid kalena ku xigi lahaa, runta ayaa ah in Apple ay suuqa ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda ayna kuwa kale ka dhigtay inay beddelaan nidaamkooda. Android sida ugu horaysa iyo hadii kaleba, waa ta Apple ka dhigtay inay u hogaansamaan sharciyadeeda maxaa yeelay qof walba wuu ogyahay inay isku dayayso inay ku sii xirnaato kaligeed. Tani macnaheedu maahan in koox macaamiil ah ay tahay taleefanka xulashada midkood sababo la xiriira sahlanaanta adeegsiga iyo xasilloonida nidaamka. Dhinaca kale, Android waa nidaam aad u xiiso badan oo aan xadidnayn. Haddii ay jeclaadaan iyo in kale waxay ka dhigtay tufaaxa inuu beddelo istaraatiijiyaddiisa ciyaarta annaga macaamiisha ah. Si kale haddii loo dhigo, tartanku annaga ayuu ina anfacayaa ee shirkadaha iyo maskaxyada qalloocan ee kuwa waaweyni innagama faa’iideeyaan inay nagu xidhaan xeerarkooda.
Si An Hu Lo dijo
Android waxay soo bandhigtay dhowr nooc, nooc bb qaar ah (sida kan aad sheegtay) iyo mid kale oo diirada saaraya taabashada, sidoo kale interface-ka ios? Intaan ogahay, waa shey-tusmeed shaashad iyo shaashad quful-bood ah, laakiin haddii aad u jeeddo in tufaaxu ikhtiraacay laba jibbaaran, si fiican….
Jawaab Si An Hu Lo
Dabcan! Apple waxba ma qaban waana taas sababta aan u eryay inta kale ee warshadaha, halkaas waxaad ku haysataa RIM, Nokia, Timir, iwm.
Noocyada taabashada diiradda saaraya ayaa mar dambe yimid oo gabi ahaanba wax shaqo ah kuma lahan wixii markii dambe noqday Android
Ku jawaab sergi
Apple ma kala saarin warshadaha intiisa kale, warshadaha intiisa kale keligood ayaa burburay. Sababtoo ah ma aysan aqoon sida loo yeesho himilo mustaqbal oo ay ku nastaan ​​hal-ku-dhigooda, Nokia, RIM, iwm, ma aysan aqoonin sida loo “cusbooneysiiyo” wax soo saarkooda oo loogu cusbooneysiiyo waxa ay suuqa ka dalbadeen.
Sababtoo ah haddii kale Apple sidoo kale waxay lahaan lahayd Google oo aan fiirinayn oo fiirin lahayd, dhulka oo xawaare buuxa ku socda.
Dhirta 33 dijo
Waa iska caadi inuu cuno dhulka, maadaama uu yahay hal mobiil oo la tartamaya adduunka
Mana sameyn karto mobiillo badan maxaa yeelay markaa ma noqoneyso Apple, waxay lumineysaa khibrada isticmaalaha iyo kala-baxa ayaa bilaabmi doona.
Ku jawaab Keaper33
Miyaan bilaabi lahaa ?? ip ipad3 ama iphone5 ama 4 ama 4S markay soo baxaan waxay u ordi doonaan isla iphone3 ama ipad1 ???? kaalay nin !!! ha iga qoslin.
Waxaa intaa dheer, Siri wuxuu kaliya ka shaqeeyaa 4S, marka uusan ku shaqeyneyn 4.
Siri Siri Siri, waa waxtar ayey yeelan kartaa waqti ka waqti laakiin aniga isma arko aniga oo maalinba maalinta ka dambeysa isticmaalaya:
Lama isticmaali karo haddii buuq jiro
Laguma shaqeynin iphone 4s (waxay ku jirtaa serverka tufaaxa) markaa waxaad u baahan tahay xirmo xog ah
Qaarkood waxay layaabi karaan sababta kaliya 4s hadii iphone uusan ka shaqeeyn, waa mida ugu fudud, iyaga oo ka tagaya muuqaalkaas "gaar", waxay ku siinayaan "sabab" aad ugu badaleyso iphone 4 kaaga 4-ta.
Ii sheeg qofka adduunka jooga ee haysta lacagta uu ku iibsado iPhone-ka oo aan haysan si uu ugu bixiyo xirmo xog ah? Qayb kale oo macluumaad ah: haddii siriku aanu waxtar lahayn, ma jiri lahayn nuqulo badan oo android ah oo la mid ah IRIS (sidee wax la yaab leh u ahayn maahan? Haddii aannu u akhrino si kale, waa SIRI), koollo, iwm. Arinta kale, siri ayaa horeyba loogu tijaabiyay fikradaha kale sida ipod taabashada 4 iyo iphone 4 waxayna u shaqeysaa si qumman. marka laga reebo qaar kood jabsadayaal ah oo horeyba loogu soo diray iphone 4 iyaga oo wata server-kooda gaarka ah sidaa darteed maahan oo kaliya wax ka mid ah iphone 4s (kaas oo garaaca taleefan kasta oo suuqa yaal).
Iyadoo android kama hadleyno soo saarista taleefannada (taasi waa shay Samsung, HTC, iwm.) Laakiin nidaamka hawlgalka moobiilka loogu isticmaalo badan yahay.
Oo waxay noqon kartaa in waayo-aragnimada isticmaaleyaashu ay ka fiican tahay Apple, laakiin dadku waxay sii kordhayaan jecel yihiin Android (haddii ay tahay xorriyaddooda markay isticmaalayaan, noocyadeeda iyo qiimaheeda ama wax kasta) oo sidaas darteed way cunaysaa jidkeeda.
Iyo wixii ku saabsan kala qaybsanaanta ... dhib maahan hadda, ugu yaraan Android. Waa run in noocyada hadda jira ay jiraan, laakiin Ice Scream Sandwich ayaa lagu xallin doonaa.
Walaal si balaaran ayaa loo adeegsadaa maxaa yeelay waxaa jira tiro aan badnayn oo ah alaab aad u jaban oo adeegsada nidaamka Android oo xitaa bisadu iibsato, macruufka oo kaliya leh iPhone iyo iPad ayaa si fiican uga faa'iideysta
haddii aad bilowdo inaad waxyar dib u sii eegto shaxanka waxaa laga soo qaatay motorola taxanaha motomag ee ka hooseeya Linux taabashada taabashada timirta iyo soni ericsson
Ku jawaab Zombiekiwi
Labadaydii taleefan ee iigu dambeeyay waxay ahaayeen androids, waligey iphone ma helin, waxaan ahay Linux iyo anti-apple. Taasi waxay tiri, haddii aan is barbar dhigeyno, ma ahan inay ahaato Android vs. Soo bandhigida iPhone, ama isbarbar dhig bilowga horumarka labadaba ama soo bandhigida labadaba.
"Linuxero iyo anti-tufaax."
Weedhaadu si aad ah ayey iskaga hor imaaneysaa, maxaa yeelay inkasta oo Apple uusan qiranayn, haddana qoto dheer waa Linux.
Laakiin waan ku fahmay, ma wadaagayo siyaasada xidhan ee Apple midkoodna leeyahay.
Mac OS maahan Linux, halkii Linux waa Unix, maadaama ay labaduba isku ilo ka wada cabayaan
Markii aan idhi waa sida Linux oo kale waxaan ula jeedaa Unix. U adeegsiga Linux qaabka amarka waa waxa aad haysato, taas oo mararka qaar ku wareerta xD.
Aynu aragno ... Mac OS X wuxuu ka soo jeedaa UNIX, ma ahan Linux ... ... iyo iOS-na way la mid noqon doonaan laakiin wax aad u xeel dheer, sidaa darteed way ka duwan tahay Android oo leh kernel Linux ah. Waxaad dhihi kartaa waa ilma adeer, laakiin iOS maahan Linux.
Ku jawaab Roberto_miguel_z
Subax wanaagsan, waxaan kuu sheegayaa waxa dhabta sheekadu ahayd.
2002-dii Apple waxay iskudayeysay inay sameysato kaniini laakiin noocyadan muu qancin Steve sidaa darteed waxay go'aansadeen inay soosaaraan taleefan oo labo koox ay shaqeeyaan midkoodna wuxuu yareyn doonaa osx kan kalena wuxuu balaarin doonaa nidaamka howlgalka ee ipod. Ugu dambayn OSX-da la dhimay ayaa la dooran doonaa. Mid ka mid ah horumariyeyaashan iPhone-OS kii ugu horreeyay ayaa akoon gmail sameeyay sanadkii 2005 ka dibna walaalkii weynaa ee aan idhaahdo, Google wuxuu xaqiiqsaday in lagu kariyey Apple oo uu ku dhammaaday inuu iibsado shirkadda Android. Iyo ilaa 2007 markii uu iphone soo baxay, Google waxay kaliya ku koobtay inay fiidyowyo geliso YouTube-ka nacasyada sameeyay nuqul ka mid ah Android ee Blackberry. Markay iphone iibsadeenna ay arkeen, waxay dhaheen "waanu rabnaa" sidii Bill Gates yidhi markuu arkay Mac.Halkaasna nuqul, nuqul, nuqul iyo nuqul. Kiiboodhka ka baxsan, dhaqdhaqaaqyo taabasho badan, dukaanka app, iwm. Haa, baarka ogeysiiska waa nuqul ka mid ah Android-ka Applena waxay ula kac u sameysay iyadoo nabad ka heleysa in Google aysan waligood ku soo wargalin doonin wax xatooyo ah maxaa yeelay qofkii xada tuug wuxuu leeyahay 100 sano oo cafis ah.
Waa maxay aragtida shirqoolka ee aad kor u qaadday shaarkaaga si aad isugu daydo inaad u wajahdo xaqiiqda faa'iidada Apple. Sababtoo ah waxaan ku aqriyay halkan, in haddii aysan ahaan laheyn midkii ugu xumaa ee Pedro J. ee "El Mundo".
Aragtida shirqoolku waa tan dhahaysa in tufaax uu soo guuriyey android. Aynu u tagno midka aan cidina rumaysan.
hahahahaha taasi waa run
waan arkaa dijo
Tonotku had iyo jeer wuxuu ku soo baxaa waajibaadka.
Ku jawaab Veovao
Marnaba dhagaysan maayo noloshayda nacasnimada ah noloshayda, sidaad adigu leedahay, waxaan iibsaday 2005 oo sida ku cad maqaalka aan soo saaray tan iyo 2003, cago iyo madax midna ma leh, aiii muxa tufaax laakiin dhammaantood waa qudhun, shaqooyin steve just keria kitarse to tartan ka dhigaya inuu muxo hore, freak out and look, right now android is the most used operating operating and number of terminals to choose is very much, sidoo kale lambar furan, leh ios iyo iphone, terminal sanad walba, kaas oo sidoo kale waa mid waqtigeedii dhamaaday maadaama lasii daayay macruufka cusub iyo waliba waxkasta oo aad uxiran, kudhowaad fursado aan wax laga badalin, kaliya JAILBREAK, shaki la'aan kan ugu fiican ee ANDROID
Ku jawaab Darioykevin
Maxay ku kala duwanaanaysaa, sida ay magaalooyinkayga ka dhihi jireen: "Kuwii dhintay ilaa godkii, iyo kii noolaa oo bun!"
Waxa aan ogahay ayaa ah in astaamaha ugu horreeyay ee Android ay ahaayeen sida Blackberry, taas oo ah, waxay nuqul ka sameynayeen RIM, laakiin markii iPhone soo baxay, waxay soo guuriyeen nuxurka iPhone, waxay ahayd teebabka, waxay ahayd kubbad, dhammaan taabashada iyo kiiboodh. Waa run in Apple ee iOs4 ay soo guuriyeen baarka ogeysiiska, laakiin aan aragno, Android ayaa soo guurisay inta hartay oo dhan, nuxurka iPhone-ka ayaa la soo guuriyey.
Jawaab Sergio García
Hello saaxiib Zack, Android waxay iila muuqataa nidaam hawlgal weyn, waana run in baarka ogeysiiska uu si muuqata ula mid yahay kan nidaamkan. Android waxaa laga yaabaa inuu bilaabay inuu horumariyo 1900 haddii aad rabto, laakiin waa inaad isbarbardhigtaa Android-ka ugu horreeya kan ugu horreeya iPhone, waxaan dib u cusbooneysiin doonaa xusuustaada ...
Aaladda ugu horreysa wuxuu ahaa qalab aad ugu eg Blackberry, wax taabanaya, nidaam loo adeegsado furayaasha. Dhinaca kale, ka dib muuqaalka iPhone muddo ka dib Android-ka cusub ayaa ifka u soo baxay, kaas oo heli doona fikrado badan oo ay lahayd, sida astaamo, rogista shaashadda iyo xitaa tilmaanta ah soo dhawaanshaha ama dibedda.
Halkan qof kastaa wuu ka koobiyeystaa qof walba, taasi waa iska caddahay, laakiin Android ayaa soo guuriyey markii hore Apple-na hadda way soo guurisay
Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaan u maleynayaa in horumarka Android horay u bilaabay, in kasta oo Apple bislaato wax soo saarkiisa marka hore, aniga labadayduba waa la soo guuriyey ……… laakiin shaki la’aan Android way ka duwan tahay macruufka, Linux kernel, aad bay u badan tahay, waxay noqon kartaa horumar dhinacyada qaarkood.
Laakiin weli, dhammaan taariikhda tikniyoolajiyadu waa nuqulo. Weydii XEROX
Dhib malahan qofka bilaabay marka hore, hadaanay aheyn yaa sida ugufiican usameeya. Caddaalad iigama muuqato aniga in la ii oggolaado shaqeynta iyo in cid kale aysan isticmaali karin. Waa wax lagu qoslo. Sidoo kale aasaasiga ah ee Android marwalba wuu ka duwanaa oo wax badan ayaa laga qabtaa, kaliya in la xuso tusaale, iyo macruufka ayaa lagu daray multitask illaa noocyo badan kadib.
In kasta oo ay ahayd android, haddana waa inaad aragtaa noocyada ugu horreeya ee lagu ogaanayo in android ay ku jihaysan tahay noocyada kale ee taleefanka, laga yaabee in horay loo abuuray laakiin waxaan korsadaa waxa ay tahay maanta ka dib iphone
Ku jawaab alib
Si aan fikrad fiican u helno, waa inaan aqrino dukumiintiyada warbaahinta laga soo bilaabo 2003, xusuusnow, in kastoo qaar badani diidaan, Newton wuxuu noqon lahaa awoowgii iPhone-ka 1995, fikraddu waa isku mid, qalab casri ah oo dabcan waqtigaas ah , Caawinta waxaa iska lahaa Palm inc. Waxaan haystaa Newton oo waxaa jira macruuf badan iyo in Steve Jobs baajiyay horumarkiisa 2001 dii shaki ayey ku jiraan markay abuurayaan iPod wuxuu arkay suuqa taleefanka gacanta horeyba waqtigaas waxaa horay uga jiray suuqa Windows CE iyo Mobile xitaa Palm Waqtigeeda dahabka, shaki la'aan iOS wuxuu bilaabay horumarkiisa 2003 hagaajinta iPod-ka, xusuusnow in Symbian ay waqtigaas ugu fiicneyd suuqa ka dib Palm OS, 2007 ayaa timid oo iOS-ka leh iPhone 2008 ayaa yimid iyo kan G1 oo leh Android cad waa macquul, maadaama labaduba ay yihiin kuwa ugufiican midka ubaahan midka kale inuu la tartamo oo ka fiicnaado.
Faallo cad, shaki la'aan wanaagga yar ee Apple ku keenay adduunka, waa tartan, baahida loo qabo in wax la cusboonaysiiyo iyo cadaadiska lagu tartamayo. La’aanteed iPhone-ka oo caan ku ah taleefannada casriga ah, ma haysan lahayn Androids raqiis ah ama 4-xuddun ah Androids …… marka ugu yaraan Apple wax wanaagsan ayey qabatay.
Aniga ahaan nuqulada ma xuma. In Apple ay soo guurisay XEROX, in Microsoft nuqul ka sameysay Apple, in Apple nuqul ka sameysay Android, nuqul Android ah Apple ma xuma. Ma xadaan koodhka ilaha, waxay nuqul ka dhigaan waxqabadka, sida ay tahay inay u gartaan inay sameeyaan isla sidaas.
Waxay ila tahay cadaalad iyo si qumman aniga.
Waxa aan u adkaysan karin ayaa ah in shirkadaha sida Apple ay rabaan inay patent ahaan u oggolaadaan. Iyo inay maxkamada aadaan. Waa wax lagu qoslo. Maaha sababta oo ah Apple waxay ku andacoonaysaa inay ikhtiraacday taleefanka casriga ah, oo aan run ahayn, waxay xaq u leedahay inay ka hortagto cid kasta oo samaynaysa taleefan casri ah. Waxay xuduud la leedahay kuwa lagu qoslo.
Hal xusuusin: Andy Rubin wuxuu injineer ka bilaabay shirkadda Apple Inc. 1989.
Ku jawaab Smonge
Oscar Cortezz dijo
Ha isbarbar dhigin android-ka iyo OS-ga marka loo eego dhanka inuu yahay nidaamka ugu isticmaalka badan ee la isticmaalo taas oo iska cad Apple waxay leedahay nidaamkeeda iyo taleefoonkeeda, Google waxay leedahay nidaamkeeda ay ku shaqeyso laakiin ma ahan taleefoonkeeda sidaas darteed dabcan wuxuu sameyn doonaa inta badan isticmaalka maxaa yeelay Sony, Samsung, Lg, HTC iwm ... Way istcimaalaan laakin isbarbar dhigi maayo tayada Apple ilaa hada yaa garanaya goor dambe laakiin ma aaminsani. Hadana hadaan ka hadalno nuqul ka sameynta baarkiisa ogeysiiska ee ii sheegaya koobiga Siri ee android isku daydo inay la jaan qaado codkeeda S, waqti kadib waxaa jiri doona kuwa sii wata hal abuurka oo aan nuqul ka sameysan !!!
Jawaab Óscar cortezz
Xeerarka Apple dijo
Iyo waxa kaliya ee kuwa Android ay helaan ay tahay "IOs copy the notification bar" laakiin ma sheegaan waxyaabaha ay android koobiyeeysay IOs.
Ku jawaab AppleRules
J, waxa aan arko anigu dan kama lihi cidda aan nuqul ka samaynayo cidda aan ogahay oo keliya in android ay ka roon tahay macruufka dhinac kasta
Ixtiraamka saxda ah ee Android wuxuu leeyahay daciifnimo ka badan tan iOS, labaduba waxay leeyihiin iibkooda iyo khasaarahooda, laakiin si daacadnimo ah Android ma ahan tan ugufiican, sidaad dhahdo, noqoshada Android, waligeed sida ugu dhaqsaha badan ugama socon doonto markay siiyaan sanadka ugu dambeeya ee cusbooneysiinta si kastaba ha noqotee IPhone si fiican ayaa loo hagaajin doonaa oo aan la mid ahayn maalinta koowaad laakiin waligood kama tagayaan isaga oo xishood leh inkasta oo uu da 'yahay. waxa ku dambeeya kala soocida waxyaabaha tufaaxa waa tayadooda
Ciid wanaagsan Christmas ka Androidsis
Miyuu IOS ka dheecaan badan yahay Android?